Tababaraha Real Madrid oo si weyn kaga soo hor jeestay in kulanka Barcelona iyo Girona lagu ciyaaro Miami – Gool FM
Tababaraha Real Madrid oo si weyn kaga soo hor jeestay in kulanka Barcelona iyo Girona lagu ciyaaro Miami
Dajiye September 14, 2018
(Real Madrid) 14 Sab 2018. Julen Lopetegui ayaa ka dhawaajiyay sida uu kaga soo hor jeedo in kulanka La Liga ee Barcelona iyo Girona lagu ciyaaro magaalada Miami ee dalka Mareykanka xili ciyaareedkan.
Hadalka macalinka kooxda Real Madrid ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii uu kasoo muuqday shir jaraa’id maanta oo Jimco ah, kahor kulanka horyaalka La Liga ay Sabtida ay booqan doonaan Athletic Bilbao.
“Ma doonayo in aan faragalin ku sameeyo arrimaha siyaasadeed ee ciyaarahan ama aan ka hadlo dhibaatada ay taageerayaashu dareemayaan”.
“Laakiin anigu ma taageersani kulamada lagu ciyaarayo dalka Mareykanka, waxaa muhiim ah koox kasta ay ku ciyaarto garoonkeeda”.
Kooxaha Barcelona iyo Gerona ayaa ku ciyaari doona dalka Mareykanka bisha soo socota ee January iyadoo ay arintan qeyb ka tahay heshiiska uu dhawaan maamulka La Liga saxiixeen si kulamada La Liga daqaala looga raadiyo waqooyiga Ameerika.
Barcelona oo daaha ka qaaday liiska rasmiga ah xidigaha ay ula safri doonto kulanka Real Sociedad
Spalletti oo si weyn u amaanay Nainggolan, isagoo dhinaca kale ka hadlay muhiimada uu Inter u leeyahay